Uwa nke a sefu!
Eeekwa! Mberede nyịrị dike. Ọ bụkwa mberede ka e ji amata nwa dike. Ọ bụ ihe nwute na ụmụ mmadụ bịara ịgba ọsọ maratọnụ, na ndị bịara ikiri ha ka ndị omekaome lara ndụ ha n’iyi site n’ịgba ogbunigwe n’abọ nke merụrụ ọtụtụ ụmụ mmadụ ahụ.
Ụwa nke a dịkwa egwu. Ụmụ mmadụ ọgazị akpọchibido onwe ha ụzọ ka enwe na adaka a kpọchiri na zuu (Zoo)? Keduzị nke bụ na ụmụ mmadụ agaghịzịkwa agbakọ ịnara ikuku? Kedụzị nke na ụmụ mmadụ agaghịzịkwa apụta nyara anwụ ghara ịna achịrị mkpụrụ obi ha n’aka? Kedụzị nke na ụmụ mmadụ agaghịzịkwa aṅụ miri tọgbọ iko n’ụwa nke a ugbu a? Keduzị nke na ụmụ mmadụ apụghịzịkwa ịgbakọ ghara ịna ele anya n’azụ ukombụ ha, ịmata ma ọ dị ndị pa egbe ịgba ha?
Ụdịka ndụ gịnị bụzị ndụ ndịa anyị nazịkwa ebi na mmadụ ahụghịzịkwa mmadụ ibe ya n’anya cha cha! Ụwa nke a sefụ! Ụwa enweghị isi, nke o ji enwe ọdụ cha cha!